ဒုက္ခသစ္စာ | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: ဒုက္ခသစ္စာ
သာသနာအတွက်လိုအပ်နေသောကွက်လပ်တစ်ခု မြန်မာပြည်သည် အဖက်ဖက်က တိုးတက်နေသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ အမျိုးမျိုး တိုးတက်နေသော ဤခေတ်တွင် မြတ်စွာဘုရား၏ ပဋိပတ္တိသာသနာဘက်ကလည်း တိုးတက်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆသည်။ ပဋိပတ္တိကျင့်စဉ်မှာ ခက်ခဲနက်နဲကြောင်း ဗုဒ္ဓဘာသာ သူတော်စင်တိုင်း သိပါသည်။ သို့သော် ခက်ခဲနက်နဲ၍ ပစ်ပယ်ထားရမည် ဆိုသည်မှာလည်း နည်းလမ်းမကျချေ။ မှန်မှန်ကန်ကန် ကျင့်ကြံ၊ ကြိုးစား၊ အားထုတ်၊ အလုပ်လုပ်ရန် လိုအပ်သည်သာ ဖြစ်သည်။ သာသနာ ချစ်မြတ်နိုးသူတို့သည် သာသနာတိုးတက်ရန် ပဋိပတ္တိသာသနာကို အားကိုးမိကြသည်။ မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာသုံးရပ်၌ ပဋိပတ္တိသည် အားနည်းနေသည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဒုက္ခသစ္စာ, နိဗ္ဗာန်, ပဋိပတ္တိ, မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ်, အနိစ္စ, မြတ်စွာဘုရား	| Leaveacomment
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 35
Posted on December 27, 2011 by chitnge
ပျံ့မွှန်းမွှေးလှိုင်ကြူ -35 သစ္စာဝါဒီ အသျှင်နန္ဒ၀ံသ (မဟာဝိဇ္ဇာ)ဟောကြားတော်မူအပ်သော တရားတော်ဝိပဿနာ နည်းပညာ – အဆက် ကဲ . . . ကြည့်လိုက်ကြဦးစို့ ဒီခန္ဓာမှာ ဉာဏ်နဲ့ ကြည့်လိုက်ကြဦးစို့ ဘယ်လိုတုန်း ဒီခန္ဓာမှာ တကယ်တော့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သဘောက ဒုက္ခသစ္စာသဘော သက်သက်မျှသာဖြစ်တယ်။ ဒီ ဒုက္ခ သစ္စာကို ဒုက္ခသစ္စာရယ်လို့ သိနားလည်ပြီးတဲ့နောက် . . . ။ ဒီဒုက္ခ သစ္စာကြီးကို မလိုချင်တော့လို့ မုန်းတော့လို့ ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီး နောက်ထပ်တဖန် ထပ်မံ၍ မရချင်တော့လို့ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged ၀ိပဿနာ, ဒုက္ခသစ္စာ, သင်္ခါရ, အနိစ္စ	| Leaveacomment
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ – 11
အခေါင်မြတ်ပန်း အောင်ပန်းမွှေးလှိုင်ကြူ အခန်း(၈) ( ဒေါက်တာချစ်ငယ် ၏ ငယ်မူ ကလောင်ခွဲ လက်ရာများ ) ခြေလှမ်းသုံးလှမ်း နှင့် အာလောကော ဥဒပါဒိ ခန္ဓာကိုယ်ကို သုံးသပ်နိုင်တဲ့ သမ္မသနဉာဏ်နဲ့ ခန္ဓာ့ဖြစ်ပျက်ကို ရှုမြင်တယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဖြစ်ပျက်ကို မြင်တယ်။ ခြေလှမ်း တစ်လှမ်း။ ကျန်တစ်ဖက်မှာလည်း စက္ခုံဥဒပါဒိ ဖြစ်တယ်။ ( Vision ) ။ ဖြစ်ပျက် ဒုက္ခသစ္စာလေ။ သူ့ကိုမြင်တော့ စက္ခုံဥဒပါဒိ ဖြစ်တာပေ့ါ။ နောက်ပြီး ဉာဏဥဒပါဒိ ဖြစ်တယ်။ … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ဒုက္ခသစ္စာ, ရွှေစာမျက်နှာများ, ဖြစ်ပျက်	| Leaveacomment